San Htun's Diary: ရက်ကွက်ထဲမှာတော့ဗျာ - ၃
ရက်ကွက်ထဲမှာတော့ဗျာ - ၃
ကျောင်းက ကြီးလေးကြီးမှာ ပါဝင်တာက တရုတ်ကျောင်းသားတွေပါ။ တရုတ်ကျောင်းသားတွေရဲ့ထူးခြားချက်က အင်္ကျီတထည်ကို တပတ်လုံးလုံး ဝတ်တာပါ။ NUS မှာတုန်းကလည်း တရုတ်ကျောင်းသားတွေက ဝတ်စုံတစုံကို ၃ရက်အတိ ဝတ်တတ်ပါတယ်။ အုပ်စုထဲက Zhao Yan ဆိုတဲ့ တရုတ်မလေးဆို အင်္ကျီအဖြူက အမည်းဖြစ်အောင် ဝတ်တာပါ။ နေ့ စဉ် အင်္ကျီလဲတဲ့ တရုတ်ဆိုတာ ရှားမှရှား။ တရုတ်ပြည်မှာ အေးလို့ချွှေးမထွက်ပေမဲ့ စလုံးလို ပူတဲ့ နေရာမှာ စဉ်းစားတာ ကြည့်တော့။ သူတို့ ဆီက အနံ့ တမျိုးရတယ်။
NUS, SA 29 Team 12 တုန်းက တရုတ် ဘော်ဘော်တွေ စန်းထွန်း၊ ပြည့်ပြည့်၊ မေသူ၊ မဆွေ၊ အိကေ၊ Zhao Yan, Wang Wan Fu, Zhao Tian Ming
အိအိ၊ ဘ၊ ကောင်းကောင်းတို့အုပ်စုထဲက Wang Ming ဆို တက္ကသိုလ်တက်နေစဉ် တလျှောက်လုံး အင်္ကျီ၂ထည်၊ ဘောင်းဘီ ၂ထည်ပဲ ရှိတာတဲ့။ အင်္ကျီတွေကတော့ ဈေးကြီးတဲ့ အားကစားဝတ်စုံတွေ။ သူ တက္ကသိုလ်တက်တုန်းက ဓာတ်ပုံတွေ ကြည့်ရင် ၂ထည်တည်းသော အင်္ကျီဝတ်တဲ့ မစ္စတာ ဒါဝတ် အဲလေ Wang Ming ကို တွေ့ ရပါတယ်။
အိအိ၊ ဘ၊ ကိုစိုင်း၊ Wang Ming၊ ကိုဇော်မျိုးအောင်
အခု အဆောင်မှာလည်း တရုတ်မတွေရှိတဲ့ နေရာနားက သန့် စင်ခန်းဆို ညစ်ပတ်ပါတယ်။ ရေဆွဲမချတာ၊ ညစ်ပတ်လို့အဆောင်မှုးတွေက အမြဲ သတိပေးတာ ခံရတာပါ။ တရုတ်မတွေလည်း ကျောင်းက ထွက်သွားတော့ သန့် စင်ခန်းလည်း သန့် ရှင်းလို့ ။ တရုတ်မတွေရဲ့အခန်းက ရှုပ်ပွနေလေ့ ရှိပါတယ်။ ဆူနမ့် အခန်းက တို့ အုပ်စုထဲမှာ အပွဆုံး။ Yanzi အခန်းကို မြင်တော့မှ ဆူနမ့် အခန်းက တော်သေးတယ်။ ကျောင်းကို ရောက်တာ ၅လပဲ ရှိသေးတဲ့ Yanzi က ကျောင်းမှာ ၈လ နေပြီးတဲ့ တို့ တွေထက် ပစ္စည်းတွေ များပြီး ခြေချစရာ နေရာမရှိအောင် ပွနေတာပါ။ ကြွက်သိုက်လို့တို့ တွေက အတင်းဆိုလေ့ရှိပါတယ်။ မီးဖိုချောင်ဆိုရင်လည်း တရုတ်မတွေ ချက်ပြီးရင် ဘယ်တော့မှ သန့် ရှင်းလေး လုပ်လေ့မရှိပါဘူး။
လူဦးရေ နည်းပါးတဲ့ ပြည်နယ်မှာတော့ ကလေးတယောက်ထက် ပိုယူခွင့် ရှိပေမဲ့ တမိသားစု ကလေးတယောက်ပဲ ယူရတဲ့ စနစ်ကြောင့် တရုတ်တွေက တဦးတည်းသော သားသမီးတွေပါ။ နောက်ထပ် ကလေးတယောက် ယူမယ်ဆိုရင် အစိုးရကို ပိုက်ဆံအများကြီး ပေးရတာတဲ့။ တရုတ်မတွေ အများကြီး တယောက်လောက် ချိတ်လို့Jia Chaung ကို တို့ တွေက အကြံပေးပါတယ်။ Jia Chaung က ဘယ်လို ပြန်ပြောလဲဆိုတော့ ထမင်းစားဆောင်မှာ တရုတ်တွေ အတူစုထိုင်ကြရင်တောင် တရုတ်မတွေက သူတို့ ကို စကားတောင် ဟဟ မပြောဘူးတဲ့။ တနိုင်ငံတည်းက မဟုတ်တဲ့အလား။ ဘိုတွေကိုမှ ချိတ်ချင်တာတဲ့။
သူပြောမှ တို့ တွေ သတိထားကြည့်တော့ လားလား အမှန်ပဲဗျို့ ။ ဘိုတွေကို ချိတ်ထားတာက တရုတ်မတွေ။ ဂရင်းကဒ်ရအောင် ဒီနေ့ ကစပြီး တရုတ်မတွေလို ဘိုတွေကိုပဲ ချိတ်တော့မယ်လို့တို့ တွေက နောက်လေ့ရှိပါတယ်။ တရုတ်နိုင်ငံသားကနေ တခြားနိုင်ငံသား ခံယူလိုက်ရင် တရုတ်ပြည်ကို ပြန်လို့မရတော့ပါဘူးတဲ့။ ဖိလစ်ပိုင်တွေကတော့ တခြားနိုင်ငံသား ခံယူထားတာတောင် ပတ်စ်ပို့ မရှိလည်း ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံသားလို့အစိုးရက ယူဆပြီး ကြိုက်တဲ့အချိန် ပြန်လို့ရပါတယ်။ တခြားနိုင်ငံသား ခံယူလိုက်ရင်တောင် ကိုယ့်တိုင်းပြည်ကို မချစ်တဲ့သူလို့မရှိပါဘူး။ ဘဝတက်လမ်းအတွက် နိုင်ငံခြားမှာ နေရင်း နိုင်ငံသား ခံယူလိုက်ကြပေမဲ့ အသက်ကြီးလာရင် ကိုယ့်မြေ ကိုယ်ရေမှာ နေချင်ကြသူချည်းပါပဲ။
Yanzi က CS (Computer Science) က ဆိုရင် MBA က တရုတ်မတွေနဲ့မိတ်ဆွေမဖွဲ့ ပါဘူး။ CS အချင်းချင်းပဲ မိတ်ဖွဲ့ လေ့ ရှိပါသတဲ့။ ရာမား ရယ်သံနဲ့နှိပ်စက်လို့အခန်းပြောင်းပြေးရတဲ့အီရန်မ Nikoo ဆို စန်းထွန်းကို မိတ်မဖွဲ့ ဘူး။ စန်းထွန်းက ရာမား၊ ဆူနမ်တို့ အုပ်စုထဲကကိုး။
တက္ကသိုလ် အများစုက ဆရာဖြစ်အောင် ထရိန်းပေမဲ့ Xiao Bai တက်ခဲ့တဲ့ HuBei Normal University ကတော့ ဆရာမဖြစ် မထရိန်းပါဘူး။ Normal University တွေက အမေရိကန်သာသနာပြုတွေ တည်ထောင်ခဲ့တဲ့ တက္ကသိုလ်တွေ ဖြစ်လို့ ပါတဲ့။ သင်ရိုးညွှန်းတမ်းတွေအားလုံးက တရုတ်စာတွေမို့ လို့တရုတ်တွေက အင်္ဂလိပ်စာ အားနည်းပါတယ်။ ကျောင်းကောင်းကောင်းတက်ခဲ့တဲ့ သူတွေသာ အီးကောင်းတာပါ။
ရွှေမြန်မာတွေကတော့ ချိန်းလိုက်ရင် မြန်မာစံတော်ချိန်အတိုင်း နာရီဝက်၊ တနာရီလောက် နောက်ကျတတ်ပေမဲ့အချိန်တိကျတဲ့ တရုတ်တွေကတော့ ၁၅ မိနစ်လောက် စောရောက်နေလေ့ရှိပါတယ်။ ကိုစိုင်းက စန်းထွန်းတို့ တွေကို တကယ်ရောက်မဲ့အချိန်ပဲချိန်းလို့ဆူလေ့ရှိပါတယ်။ ကွန်မြူနစ်ကြောင့် တရုတ်တွေက ဘာသာမဲ့တွေပါ။ ဘာကိုမှ မယုံဘဲ သိပ္ပံပညာ၊ ပိုက်ဆံကိုသာ ယုံတာတဲ့။ ဘုံကျောင်းသွားပြီး ဘာရရင် ဘာပြန်လှုမယ်ဆိုပြီး ပူဇော်ပသပါတယ်။
တိုးတက်နေတယ်ဆိုပေမဲ့ လူဦးရေကများ အလုပ်အကိုင်က ရှားပါးနေသေးတော့ အလုပ်တခုရဖို့ခက်သလို ရရင်လည်း အလုပ်မပြောင်းတော့ဘူးတဲ့။ နာမည်ကြီးတက္ကသိုလ်ကျောင်းဆင်းတွေကတော့ အလုပ်ကောင်းကောင်းရလေ့ ရှိပါတယ်။ အထက်တန်းအောင်မပြောနဲ့ဘွဲ့ ရတွေတောင် အလုပ်ရဖို့ခက်တာပါ။ နေထိုင်စရိတ်ကြီးမြှင့်တဲ့ တရုတ်ပြည်မှာ လစာက ၁၀၀၀ လောက်ရရင် ၈၀၀ လောက်က စားစရိတ်၊ လမ်းစရိတ်ကုန်တာတဲ့။ နေစရိတ်မပါသေးဘူး။ လစာက ထမင်းနပ်မှန်အောင် စားရုံပါပဲ။ တခြားအပိုသုံးဖို့မရှိပါဘူးတဲ့။ ဒါကြောင့် နိုင်ငံခြားထွက်ဖို့ကြိုးစားကြသူချည်းပါပဲ။ ကိုယ့်နိုင်ငံမှာ အဆင်ပြေရင် ဘယ်သူက နိုင်ငံခြားထွက်ချင်မလဲနော်။ နိုင်ငံခြားမှာ အလုပ်လုပ်ရတာ ပင်ပန်းပါဘိ။ Fujian ပြည်နယ်က တရုတ်တွေ သြဇီကို တရားမဝင်နည်းနဲ့ခိုးဝင်ကြလွန်းလို့သြဇီဗီဇာလျှောက်လို့From FuJian ဆိုရင် ဗီဇာပယ်ပါသတဲ့။
တန်ခိုးထွားလာတဲ့ တရုတ်က နောက်အနှစ်၃၀ဆိုရင် အမေရိကန်နေရာကို ယူမယ်လို့လီကွမ်ယုက ပြောထားပေမဲ့ တရုတ်မှာလည်း ပြသနာတွေပေါင်းစုံ။ မြို့ကြီးတွေကတော့ တိုးတက်လာပေမဲ့ ကျေးလက်ကတော့ မွဲတေဆဲ။ မြို့ပြနဲ့ကျေးလက် ကွာခြားချက် နည်းသွားမှ တကယ်တိုးတက်တာပါ။ ဟောင်ကောင်လေက မသန့် ဘူးလို့Yanzi ကို ပြောတော့ Yanzi က တရုတ်ပြည်မကြီးမှာဆို လေက ဟောင်ကောင်ထက် ဆိုးတယ်တဲ့။ ၁၉၉၇ မှ အင်္ဂလိပ်က ဟောင်ကောင်ကို တရုတ်ဆီလွဲပေးခဲ့တာဆိုတော့ အင်္ဂလိပ်ဥပဒေက ဟောင်ကောင်မှာ အခြေတည်နေပါပြီ။ စက်ရုံတွေကလည်း ဥပဒေအတိုင်း လေထဲကို ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ်တွေ လွှတ်တာပါ။ တရုတ်ပြည်မကြီးမှာတော့ အစိုးရနဲ့ပနာရရင် ထင်တိုင်းကျဲခွင့် ရှိတာကိုး။
တရုတ်ပြည်မှာ Facebook မရှိပါဘူး။ Tiananmen Square မှာ ၁၉၈၉က နာမည်ကြီး ဘေဂျင်းတက္ကသိုလ်က တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတွေ ဦးဆောင်ကာ ဒီမိုကရေစီ တော်လှန်ရေးတရပ် ဆင်နွှဲခဲ့ပေမဲ့ အစိုးရက ရက်ရက်စက်စက် နိမ်နင်းခဲ့တာပါ။ တရုတ်ကျောင်းသားတွေကို အဲဒီအကြောင်းမေးလိုက်ရင် ကြားသာ ကြားဖူးပြီး မသိဘူးတဲ့ဗျား။ အင်တာနက်မှာ ရှာလို့ မရအောင် ဘမ်းထားတာတဲ့။ ၂၀၁၀ နိုဘယ်ငြိမ်းချမ်းရေးဆုပိုင်ရှင် ထောင်ဒဏ် ၁၃နှစ် ကျခံနေရတဲ့ Liu Xiaobo အကြောင်းကိုလည်း အင်တာနက်မှာ ရှာလို့ မရအောင် ဘမ်းပါတယ်။ ခုလည်း The Lady ကို တရုတ်ပြည်မှာ ပြသခွင့် ပိတ်ထားပါတယ်။
စူးကျိုး၊ ကွမ်ကျိုး၊ ရှန်ဟိုင်း၊ Shenzen ဖက်ကို အလည်သွားတဲ့ ရုံးက မလေးတရုတ်မ ထိန်ထိန် ပြန်လာတော့ ဒီလို ဖောက်သည်ချပါတယ်။ ရှန်ဟိုင်း Expo မှာ ကလေးရှူးရှူးပေါက်ချင်တာကို လမ်းဘေးမှာ တည်နေတာတဲ့။ သန့် စင်ခန်း နီးနီးလေးကို။ အိမ်သာတွေကလည်း ညစ်ပတ်လို့ တဲ့။ လွန်ခဲ့သော ၅နှစ်တုန်းက သန့် စင်ခန်းတွေမှာ တံခါးမရှိဘူးတဲ့။ အိမ်သာသွားရင် ထီးလေး ယူသွားရသတဲ့။ ခုတော့ အများကြီး တိုးတက်လာတာ။ အအေးထက် ဘီယာတို့ ၊ အရက်တို့ က ဈေးပေါတော့ အရက်ကြိုက်ကြသတဲ့။ ဈေးမေးပြီး မဝယ်ရင် မျက်နှာထားတင်းလို့နောင်များဆို တရုတ်ပြည်ခရီးဆို တာ့တာပါတဲ့။
နို့ မှုန့် အတုကြာင့် ကလေးတွေ သေတဲ့အကြောင်းမေးတော့ လူမဆန်တဲ့ စီးပွားရေးသမားတွေကြောင့်တဲ့။ ပိုက်ဆံပေးလိုက်ရင် အားလုံးငြိမ်းသွားတာပဲတဲ့။ အိမ်မှာ သောက်နေတဲ့ Sun Flower ရေသန့် က မြန်မာ့အမှောင်ရဲ့သောက်သုံးရန် မသင့်တဲ့ ရေသန့် စာရင်းထဲ ပါလာပါတယ်။ နောက်တပတ် ရေသန့် လာပို့ ချိန် မေးလိုက်တော့ ပိုက်ဆံပေးလို့အားလုံးအိုကေသွားပြီတဲ့။ ကြက်ဥအတုကတော့ တကယ်မဟုတ်ပါဘူးတဲ့။ တရုတ်တွေက နို့ မှုန့် တို့ ၊ နို့ တွေဆိုရင် နိုင်ငံခြားက တင်သွင်းတာပဲ အားပေးကြသတဲ့။ Made in China ဆို ဝှောင်ဝှောင်ရှေးကြသတဲ့။
တရုတ်ပြည်မှာ လူတိုင်းနီးပါး ဆရာဝန် ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ၃လလောက် သင်တန်းတက်လိုက်ရုံနဲ့ဆရာရမ်းကု ဖြစ်ပြီကိုး။ စီးပွားရေးတရှိန်ထိုး တိုးတက်လာတော့ ဈေးကွက်လိုအပ်ချက်အရ လေယာဉ်မောင် လိုအပ်ချက် များလာပါတယ်။ တလောက တရုတ်ပြည်တွင်းခရီးစဉ် လေယာဉ်တစီး ပျက်ကျသွားတာ ရာသီဥတုဆိုးလို့ ၊ လေယာဉ်စက်ချို့ ယွင်းလို့မဟုတ်ဘဲ အရည်အသွေးမပြည့်ဝတဲ့ လေယာဉ်မှုးကြောင့်ပါတဲ့။ စစ်ဆေးကြည့်တော့ စီဗွီက အတုဖြစ်နေမှန်း သိလာပါတယ်။
တယောက်ယောက် ပြသနာကြုံရင်လည်း ကူညီဖို့ဝေးဝေးရှောင်ကြသတဲ့။ မျက်မြင်သက်သေဆို စစ်မေးလို့မဆုံး၊ အခန့် မသင့်ရင် ဆွဲစိခံရနိုင်လို့ တဲ့။ အခုတလော FaceBook မှာ ၂နှစ်အရွယ်ကလေးလေးကို ကားတစီးက တိုက်၊ လမ်းသွားလမ်းလာတဲ့သူတွေကလည်း အရေးမစိုက်တဲ့အပြင် နောက်ကားတစီးက တိုက်သွားပြန်တဲ့ ဗီဒီယို ပြန့် နေပါတယ်။ အားလုံး အုတ်အော်သောင်းနင်းဖြစ်ပြီး ရက်စက်လိုက်တာ၊ လူမဆန်လိုက်တာတို့ဝေဖန်နေပါတယ်။
Yanzi ကို မေးတော့ လွန်ခဲ့တဲ့ ၃နှစ်လောက်က တရုတ်ပြည်မှာ အရမ်းနာမည်ကြီးတဲ့ ကိစ္စတခု ဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်။ ဘတ်စ်ကားပေါ်မှာ ချော်လဲနေတဲ့ အဘိုးကြီးကို အကူအညီပေးမိတဲ့ တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားခမျာ အဘိုးကြီးက ပြန်တရားစွဲလို့လျော်ကြေးတွေ အများကြီး ပေးလိုက်ရသတဲ့။ ဒီကတည်းက ဒုက္ခရောက်နေရင် ကူညီဖို့တွန့် ပြီး ဘာမှမဆိုင်ဆိုပြီး နေဖို့ ကြိုးစားကြသတဲ့။
ကောင်းမွန်တဲ့ တရားဥပဒေဆိုတာ လူ့ ကျင့်ဝတ်တွေကို မဖြစ်မနေဆောင်ရွက်အောင် တွန်းအားပေးရမဲ့အစား မှားယွင်းတဲ့ တရားသူကြီး ဆုံးဖြတ်ချက်ကြောင့် လူတွေ ကူညီဖို့တွန့် သွားတာ၊ နိုင်ငံခြားသားတွေ အမြင်မှာတော့ ရက်စက်လိုက်တာလို့တွေးပေမဲ့ တရုတ်တွေက ကူညီမိရင် ဒုက္ခရောက်မှာလို့တွေးတဲ့အခါ။ စနစ်ကြီးကို အဆိုးဆိုရမလား၊ ရိုင်းပင်းကူညီစိတ် ကင်းမဲ့တဲ့ သူတွေကို အပြစ်ဆိုရမလား။
ကျောင်းမှာ Distributed Computing( Web Application Architecture) သင်တဲ့ ဆရာ Najeeb က အီရတ်ကပါ။ တနေ့ တော့ နားမလည်နိုင်ဘဲ ဇဝေဇဝါ ဖြစ်နေတဲ့ Yanzi က ဒီလို ပြောပါတယ်။
Najeeb။ ။ Why are you so tired?
Yanzi ။ ။ Because I am in period.
Najeeb။ ။ Ohhhh Ok Ok Go.
မိန်းကလေးဆို နှုတ်ဆက်ဖို့မပြောနဲ့စေ့စေ့တောင် မကြည့်၊ ကျောင်းတက်တဲ့ ကာလတလျှောက် အပေါင်းအသင်း မလုပ်၊ ယောက်ျား မိန်းမ ခွဲခြားမူ ပြင်းထန်တဲ့ အရှေ့ အလယ်ပိုင်းက အာရပ်တွေပါ။ ကျောင်းပြီးခါနီးတော့ နှုတ်ဆက်ပါတယ်။ ဟယ်လိုတဲ့မျက်နှာကို မကြည့်၊ မျက်စိလွှဲရင်း နှုတ်ဆက်တာ။ ဒီလို အာရပ်ကို ရာသီလာတဲ့အကြောင်း အမှန်အတိုင်း ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း သွားပြောတော့ မပြောသင့်တဲ့အရာလို့တွေးတဲ့( ဗီယက်နမ်၊ နီပေါ၊ မြန်မာ) မိုင်း၊ ဆူနမ်၊ ရာမားနဲ့စန်းထွန်း လေးယောက်သား မပြုံးဘဲ ဝါးလုံးကွဲ ရယ်လိုက်ကြတာ။ အာရပ် ယဉ်ကျေးမှုအရ မပြောအပ်ဘူးလို့အတော် ရှင်းပြရလိုက်ရတယ်။ နောက်ဆို ဆရာ Najeeb လည်း Yanzi ကို Why are you so tired လို့မေးရဲတော့မှာ မဟုတ်ဘူး။ အတော်ပွင့်လင်းတဲ့ တရုတ်မ။
Wei Rui ၊ Md. Saifur Rahman (Bingladesh)၊ LalBabu Sah (Nepal) ၊ Xinshan Bai ၊ Yanzi Luo၊ Xiao Ma ၊Prajwal Rupakheti (Nepal) ၊Lingyun Bao
ဆရာမကြီ: ဒေါ်ခင်မျိုးချစ်ရဲ. မိတ်ဆွေ ဂျာမန်မဟာ ဘုရားတရား ကြည်ညိုလွန်:လို့ ဘယ်ခရီးသွားသွား ဘုရားဆင်းတုတော်ကို သယ်သွားတယ်။ တနေ့တော. ဂျာမန်မ ဘုရားဆင်းတု သိမ်:ဆည်:နေတာ မြင်ရတော. ဆရာမကြီ: ဒေါ်ခင်မျိုးချစ်ခမျာ မျက်လုံးပြူ:သွားပြီ: ရင်ဘတ်ကို လက်ကလေးနဲ. အသာဖိလိုက်ရတယ်။ အပေါ်အတွင်းခံလေးနဲ. ဘုရားဆင်းတုတော်ကို ထုပ်ပိုးနေတာလေ။ မေးကြည့်တော. ဘုရားဆင်းတုတော်ဆိုတာ မသန့်တာနဲ. မထုပ်ရဘူး ဆိုလို့ သူ့မှာ ရှိတယ်.အထဲက အသန့်ဆုံး၊ အနူးညံ့ဆုံးနဲ. ထုပ်နေတာတဲ.လေ။ ဟုတ်တော.လည်: ဟုတ်သား သူ့အတွင်းခံက ပိုးသားဆိုတော. နူးညံ.တယ်လေ။ ဆရာမကြီ:က အတွင်းခံနဲ. မထုပ်ရတယ်.အကြောင်း သေသေချာချာ ရှင်းပြတော.မှ ဂျာမန်မက ပြန်ပြောရှာတယ်။ "It is culture chock." တဲ.။
အစိုးရကို မကြိုက်ပေမဲ့ နိုင်ငံကို ချစ်ကြတဲ့ တရုတ်တွေပါ။
အောက်တိုဘာ ၂၈၊ ၂၀၁၁။
တချိန်ကျရင် ဒါတွေက တကယ့်ကို သတိရစရာတွေပဲပေါ့ ။
ဟားဟား... အရေးအသားလန်းတယ်... ဖတ်လိုက်တာ ပြီးသွားမှန်းမသိဘူး... :P
ကိုယ့်ရဲ့ တရုပ်သူငယ်ချင်းမလေးတွေကတော့ ပျံနေတာဘဲ။ သဘောလည်းကောင်းတယ်။ စာလည်းတော်တယ်။ စတုိုင်လဲမုိုက်တယ်။ တရုပ်သူငယ်ချင်းကောင်လေးတယောက်ကတော့ အမေရိကားကုို မကြိုက်လို့ သူ့ ပြည်ကိုပြန်ပြီး သူ့ ပြည်က ပီအိတ်ဒီ နဲ့ ရာထူးကြီးကြီးတခုမှာ ပြန်လုပ်နေတယ်။ တရုပ်ဆုိုင်တွေတချို့ က တော့ မျက်နှာကြောတင်းလို့ မ၀ယ်စားချင်ဘူး။
ပြည်ကြီးတရုတ်တွေနဲ့နေဖူးလို့ အဲဒီက တရုတ်တွေ ညစ်ပတ်တာတော့ ကောင်းကောင်းသိပါ့... ဟီး။ လူတိုင်းကိုတော့ မဆိုလိုပါ။ သူတို့ ခမျာလည်း အရမ်းကို သနားဖို့လည်းကောင်း ၊ တစ်ခါတစ်ရံ ဦးနှောက်က အပြေးလွန်နေတော့ အမြင်ကတ်ဖို့လည်းကောင်းတယ်။ သူတို့ ခမျာ အစစအရာရာ တော်တော်လေးကို ကြိုးစားရရှာတယ်။ ဗီဇလားတော့ မသိဘူးနော်။
ပျော်ပျော်ကြီးကိုဖတ်သွားတယ်.. အဲဒီတရုတ်တွေတော့ မြင်ကိုမမြင်ချင်ပေါင်.. :P
the lady ကိုသူတို့ကဘာလို့ပြခွင့်မပေးလဲမသိ
ကိုစံထွန်းရေ.. သတင်းနဲ့ ဓာတ်ပုံလေးတွေ ကြည့်သွားပါတယ်..
ကောင်းသလို စိတ်ကိုလဲ လန်းဆန်းစေတယ်နော်..
အဲ့ဝတ်စုံ...၊ဟော...ပြည်ကြီး အလည်ပြန်တော့လည်း ဒီ
စန်းထွန်းရေးတဲ့ တရုတ်တွေအကြောင်း ဖတ်ပြီး အသံထွက်အောင် ရယ်မိတော့တာပါဘဲ
ဒီထက်ဆိုးတာဘဲ ရှိတာ.. မလွန်ပါဘူး..
တရုတ်ပြည်မှာ မြို့ကြီးတွေမှာတော့ အိမ်သာ ကောင်းလာပြီဆိုပေမဲ့ ပြည်နယ်တွေ တောရွာတွေမှာတော့ တံခါးမရှိတုန်းပါ..
တစ်ယောက်ကို တစ်ယောက်မြင်နေရတဲ့ အိမ်သာတွေမှာ ငုတ်တုတ်ထိုင်နေကြတုန်းပါဘဲ..း)
အောက်မှာတော့ မြောင်းကလေးတစ်ခုဘဲ ရှိလေတော့ တစ်နေကုန်ရေမလောင်းရင် အဲဒီမြောင်းကလေးထဲမှာ ဟိုဟာတွေ ပုံနေတော့ ဝင်လိုက်တာနဲ့ အနံ့က တစ်ထောင်းထောင်း..
အား.. ရေးနေရင်း အံချင်လာလို့ လစ်ပြီး စန်းထွန်းရေ.. မညာဘူး တကယ်အံချင်လာပြီ။
ဖတ်ရတာ အရသာရှိပဗျား...ပေါက်ဖော်တို့အကြောင်း သောင်းပြောင်းထွေလာကို အခုမှပဲ စုံတကာစေ့အောင် သိရတော့တယ်...သူငယ်ချင်းတစ်ယောက် တရုတ်နယ်စပ်မှာ တာဝန်ကျတုန်းက အလည်လာဖို့ တရုတ်ပြည်ဘက်ကို သွားကြဖို့ မကြာမကြာ ဖိတ်သပေါ့...ဒီပို့စ်ဖတ်ပြီးမှပဲ မသွားဖြစ်တာ မှတ်တယ်လို့ ကောက်ချက်ချမိတော့တယ်...တော်ကြာ ပါတော်မူတဲ့ကိစ္စ ပြဿနာတော်တက်နေရင် ခက်ရချေရဲ့...ကိုယ်ကလည်း နဂိုကမှ အိမ်သာနဲ့ပတ်သက်ရင် sensitive က ဖြစ်ပါဘိသနဲ့...
ပျော်စရာကြီးပဲ စန်းထွန်းရေ...စုံလို့ပါပဲ...ဖတ်ရင်းပြုံး..ပြုံးရင်း ဝါးလုံးကွဲရယ်....မိတယ်လို့....:)
သူ့အရပ်နဲ့ သူ့ဇာတ် ဟုတ်နေတာပေါ့နော်...။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် အတွေ့အကြုံရတာ အမြတ်ပေါ့..။ ကောင်းတာယူ၊ မကောင်းတာပယ်ယုံပေါ့နော်..။ ကွန်မြူနစ်တိုင်းပြည်ဆိုတော့ အတွင်းမှာ အဲ့ဒီလိုတွေ ဖြစ်နေတာလားမသိဘူးနော်..။
စန်းစန်းရဲ့ အတွေ့အကြုံလေးတွေဖတ်ပြီး တီတင့်စက်ရုံမှာ အလုပ်လုပ်စဉ်က အကြောင်းလေးတွေ ပြန်သတိရသွားတယ်။
တရုတ်ပညာရှင်တွေကို စည်းကမ်းကတော့ ကြပ်ကြပ်မတ်မတ်ကိုကိုင်ရတယ် စန်းစန်းရေ။
အစားအသောက်လည်းကြမ်းတယ် စက်ရုံကခွေးတစ်ကောင် ပျောက်သွားတာ သူတို့လက်ချက်မို့ ခေါ်ဆူရသေးတယ်း)
ဘယ်လိုပြောရမှန်းတောင် မသိတော့ပါဘူး။ အကူအညီပေးချင်တဲ့စိတ်နည်းပါးကြတာကို အတော်လေး အံ့သြမိတယ်။ ကလေးကို ကားတိုက်တဲ့ ဖိုင် ကြည့်ပြီး တကယ် စိတ်မချမ်းသာဘူးးးး။
ပူလစ်ဇာဆုရ Jhumpa Lahiri ရဲ့the namesake ဖတ်နေပါတယ်... the namesake နာမည်နဲ့ရုပ်ရှင်လည်း ကြည့်ပြီးသွားပါပြီ ...
ရပ်ကွက်ထဲမှာတော့ဗျာ - ၂
ရပ်ကွက်ထဲမှာတော့ဗျာ - ၁
My Family (39)
၂၁ ရာစု တတိယပင်လုံ နဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးအလားအလာ